The Irrawaddy's Blog: “ဗိုလ်ချုပ်၏ နောက်ဆုံးနေ့ရက်များ” ရုပ်ရှင်ကို ရာပြည့်အမီ ပြသနိုင်ဖို့ ရိုက်ကူးနေ
ရိုက်ကူးဖို့ ဆိုင်းပြင်နေခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဒါရိုက်တာ မောင်သူရ (လူရွှင်တော် ဇာဂနာ) တို့ စီစဉ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အတ္ထုပ္ပတ္တိရုပ်ရှင်ကားကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်အတွက် ရရှိထားတဲ့ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအနေအထားအရ လောက်ငမှုမရှိလို့ အမြည်းသဘော အနေနဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးခန်းကိုသာ ရိုက်ကူးပြီး ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့်နေ့အမီ ပြနိုင်ဖို့လည်း မသေချာသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
Posted in: News , Thiha Toe , အနုပညာ ရပ်ဝန်း
ရိုးရိုးသားသား တကယ်မှတ်မှတ်ရရ ကျင်းပပေးတာဆိုရင်တော.ပြည်သူလူထုကလက်ခံမှာပါ ၊ ဒါမှမဟုတ်ဘဲ ပါတီအလံတွေ နိင်ငံရေးဟောပြောပွဲတွေ နဲ. စည်းရုံးရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်တော. ၊ မကျေနပ်တဲ.သူတွေ သဘောမကျတဲ.သူတွေ ဝေဖန်တာခံရမှာဆိုတာမမေ့ပါနဲ. ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက သူ.သမီးကို အခွင်.အရေး ပိုပေရမယ်ဆိုပြီး မှာခဲ.တာမရှိပါဘူး ၊ ဒါပေမယ်. ဝေဖန်ရုံသက်သက်ပါဘဲ ၊ တကယ်တန်းဒီလိုလုပ်လာတာ ဟိုအရင် ၁၉၈၈ ကထဲက စပြီး အသုံးပြုခဲ့တာ ပါ ။ ဘယ်သူမှပြောဆိုဝေဖန်ထောက်ပြခဲ.တာမရှိပါဘူး ။